TikTok 12.3.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.3.4 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Application မ်ား လူမႈေရး TikTok
TikTok ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
TikTok Short-form ကိုမိုဘိုင်းဗီဒီယိုအတွက်သင့်ရဲ့သာမန်ခရီးလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာကုန်ကြမ်းကိုမှန်ကန်နှငျ့သငျ 7:45 a.m. မှာသင့်ရဲ့အံသွားနိန်နေဒါမှမဟုတ်သင် 7:45 p.m. မှာနံနက်စာအောင်နေနယ်နိမိတ်-ရှိမရှိမပါဘဲင် ဒါဟာကဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းပြောပြ 15 စက္ကန့်အတွင်းကိုပြောသည် '' သင်နေကြတယ်အဖြစ်လာ '' သည်အူကနေဖြစ်ပါတယ်။ TikTok, သင်အခိုက်မှာနေထိုင်နှင့်စူးစမ်းဖို့ထက်ကျော်လွန်သွားပါသည့်အခါဘဝကပိုပျော်စရာအတူ။
ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူမျှဝေဖို့ရယ်စရာနှင့်အမှတ်ရစရာအခိုက်ဖမ်းယူခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဗီဒီယိုများစေရန်ဂီတနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသုံးပါ။ အထူးသက်ရောက်မှု filter များနှင့်အတူလာမယ့်အဆင့်ကို, ပျော်စရာစတစ်ကာများ, ဂီတ, နှင့်ပိုပြီးရန်သင့်ဗီဒီယိုများယူပါ။ ဘဝအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားဒါကြောင့်တိုင်းစက္ကန့်ရေတွက်စေနှင့်သင်ရတယ်ဘာကမ္ဘာကြီးကိုပြသ!
သင်တို့အဘို့အဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးကကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကိုအစာကျွေးခြင်းကဲ့သို့သင်ကြည့်ရှုသည့်အရာပေါ်အခြေခံပြီးမျှဝေ။ TikTok လျင်မြန်စွာသငျသညျကွညျ့ရှုရပ်တန့်ချင်ဘယ်တော့မှသောအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့, ပျော်စရာ, ဇာတ်ဆောင်, ဦးခေါင်း-လှည်ဗီဒီယိုများပူဇော်ရန်သင့်အရသာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမဟုအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုနည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုပိုပြီးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ။
ဖန်တီးသူသန်းပေါင်းများစွာဟာသူတို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခွက်အဖိုးတန်အချိန်လေးနှင့်အသိပညာပြ TikTok အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှုတ်သွင်းခြင်းကိုခံရကြပါစေ။
အလွယ်တကူအခမဲ့ဂီတဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုများနှင့်အသံများကိုသန်းပေါင်းများစွာနှင့်သင်၏ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဟစ်ဟော့, EDM, ပေါ့ပ်, ရော့ခ်, ရက်ပ်, တိုင်းပြည်တစ်ပြည်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်တိုင်းအမျိုးအစားထဲမှာအပူဆုံးပုဒ်နှင့်အတူသင်တို့အဘို့အထူးအသားပေးဂီတဖွင့်စာရင်းများကိုဖန်တီးပါ။ သင်ပင်သင့်ရဲ့ fav ဖန်တီးသူကနေမူရင်းဂီတကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်!
ရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများနှင့်မျက်နှာ filter များအသုံးပြုမှု■
လာမယ့်အဆင့်ကိုရန်သင့်ဗီဒီယိုများယူအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများ 100+ ။ ပျော်စရာမျက်နှာ filter များနှင့်သင့်ဗီဒီယိုများအတွက်အလှတရားသက်ရောက်မှုတန်ချိန် Unlock ။
■အခမဲ့တည်းဖြတ် tools များကဗီဒီယိုကလစ်များပေါင်းစည်းနှင့်ပွား, သင်အလွယ်တကူဖြတ်ကိုချုံ့ဖို့ခွင့်ပြု
■တိုက်ရိုက်လွှင့် filter များအဆက်မပြတ်လတ်ဆတ်သော, ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ updated လျက်ရှိသည်
အက, ဟာသ, ဗီလော့ဂ်, အစားအစာ, အားကစား, DIY, တိရစ္ဆာန်များနှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို■။ အဆုံးမဲ့အမျိုးအစားကနေဗီဒီယိုတွေကိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ, သင့်ကမ္ဘာကပိုပြီးမျှဝေပါ။ လူတိုင်း TikTok အပေါ်တစ်ဦးဖန်တီးသူပါပဲ။
* မဆိုတုံ့ပြန်ချက်? feedback@tiktok.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကို tweet @tiktok
TikTok အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TikTok အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TikTok အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
superuser4k စတိုး 46.26k 27.3M
TikTok ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TikTok အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 12.3.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.tiktok.com/i18n/privacy/
File Size: 87.03MB
Release date: 2019-07-22 16:47:00
လက်မှတ် SHA1: D7:9F:7C:B8:50:9A:5E:7E:71:C4:F2:AF:CF:B7:5E:A8:C8:71:77:CA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): musical.ly
အဖွဲ့အစည်း (O): musical.ly Inc.
နယ်မြေ (L): Shanghai
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Shanghai
TikTok APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ